शीर्षकमा बाइबल पदहरू: लोभ -> पाप
संसारमा भएका कुराहरू आँखाको लालच, शरीरको कुइच्‍छा र जीवनको घमण्‍ड— यी कुराहरू परमेश्‍वर पिताबाट आएका होइनन्। यी त संसारकै कुराहरू हुन्।
२ कोरिन्थी 9:7
रकम-पैसाको लोभ गर्ने मानिस कहिल्‍यै अघाउँदैन, धन-सम्‍पत्तिको लोभ गर्ने मानिसले कहिले पनि जति कमाउन सक्‍दैन। यो पनि व्‍यर्थ हो।
धन-सम्‍पत्तिको माया-मोहमा नफस। आफूसँग जे छ, त्‍यसैमा सन्‍तोष गर्ने गर किनभने परमेश्‍वरले नै भन्‍नुभएको छ, ‘म तिमीलाई कहिल्‍यै छोड्‍नेछैनँ, म तिमीलाई कहिल्‍यै त्‍याग्‍नेछैनँ’।”
अनि उहाँले त्‍यहाँ जम्‍मा भएका मानिसहरूलाई भन्‍नुभयो, “होश गर! सबै किसिमका लोभ-लालचबाट जोगिएर बस किनभने धन-सम्‍पत्ति जति नै प्रशस्‍त भए पनि त्‍यसले मानिसलाई साँचो जीवनचाहिँ दिँदैन।”
आफ्‍ना धन-सम्‍पत्तिमा भर पर्नेहरू शरद् ऋतुमा पात झरेझैँ झर्नेछन् तर धर्मीहरू ग्रीष्‍म ऋतुका पातहरूझैँ मौलाउनेछन्।
जति सजिलो धन कमाउँछौ, उति चाँडै त्‍यो उडाउँछौ तर जति कष्‍ट गरेर धन कमाउँछौ उति त्‍यो बढाउँछौ।
गरीबलाई सताउनेले तिनीहरूलाई बनाउनुहुने परमेश्‍वरको अपमान गर्छ तर दरिद्रमाथि दया गर्नेले परमेश्‍वरको आदर गर्छ।
बेइमानदारसित धन लाभ गर्न चेष्‍टा गरे, तिम्रो परिवार सङ्कटमापर्नेछ, घुस नलेऊ र तिमी दीर्घायु हुनेछौ।
जति सजिलो पैतृक धन पाउँछौ, उति कम तिमीलाई लाभ हुन्‍छ।
 धेरै धन-सम्‍पत्ति र सुनाममध्‍ये एक चुन्‍नुपरे सुनामचाहिँ चुन। इज्‍जत पाउनु सुन र चाँदीभन्दा उत्तम हो। धनी र गरीब दुवै यस कुरामा एक छन् कि ती दुवैलाई परमप्रभुले बनाउनुभएको हो। समझदार मानिसहरू कष्‍ट आउँदैगरेको देखेर जोगिन्‍छन् तर सोच नगर्ने मानिस त्‍यसमा सोझै जाकिन्‍छ र त्‍यसले पछि पछुताउ गर्छ। परमप्रभुको आज्ञापालन गर र नम्र होओ, धन, इज्‍जत र लामो आयु पाउनेछौ। आफ्‍नो प्राणको माया छ भने दुष्‍टको मार्गमा हुने पासोहरूबाट तर्केर हिँड। बालकहरूलाई ठीक बाटो देखाऊ र तिनीहरूले त्‍यही बाटोमा हिँड्‍नेछन्। गरीबहरू धनीको दास बन्‍दछन्, ऋण लिने ऋण दिनेको दास बन्‍दछ। अन्‍यायको बिउ छर्नेले विनाश बटुल्‍छ र अरूहरूमाथि त्‍यसले गरेको अत्‍याचार बन्‍द हुँदछ। दानी भई दरिद्रसित आफ्‍नो खानेकुरा बाँडेर खाओ, तिमीले आशिष् पाउनेछौ।
 स्‍वार्थी मानिसहरू धनी बन्‍न यति हतारिन्‍छन् कि आफूमाथि दरिद्रता आइलागेको चालै पाउँदैन। कसैलाई हकारेर सुधार्नेले त्‍यसलाई सर्काउनेले भन्दा धेरै धन्‍यवाद पाउँदछ। आफ्‍ना आमा-बुबाबाट चोर्नुमा केही दोष नदेख्‍ने साधारण चोरजस्‍तै हो। लोभी मानिसले झगडा लाउँछ, बरु परमप्रभुमाथि भरोसा गर्नाले फलिफाप हुन्‍छ।
१ पत्रुस ५:२-३
 तिमीहरू खुसीसँग, करकापमा परेर होइन, तर परमेश्‍वरले चाहनुभएजस्‍तो परमेश्‍वरले तिमीहरूको जिम्‍मामा दिनुभएको बगालको गोठालो बनिदेओ। पैसाको लागि होइन, तर सेवा गर्ने मन लिएर यो काम गर। तिमीहरूको जिम्‍मामा भएकाहरूमाथि हुकुम चलाउने होइन, तर उनीहरूका अघि आफैं नमुना बन।
१ कोरिन्थी ४:११-१३
 अहिले पनि हामीहरू खान-पिउन नपाएर भोकभोकै हिंड्छौं, झुत्रे-झाम्रे लुगा लगाएका छौं, हामी कुटिएका छौं, हाम्रो घरबार छैन अनि खान-लाउन हामीले आफ्‍नै हातले मेहनत गर्छौं। अरूले सराप्‍दा हामी आशीर्वाद दिन्‍छौं। सताउँदा सहन्‍छौं। हाम्रो बेइज्‍जती हुँदा हामी मीठै बोली गर्छौं। हामी संसारको फोहर नै भएका छौं र अहिले पनि मैला फाल्‍ने कसिङ्गरजस्‍तै छौं।
१ तिमोथी ६:६-१९
 हुन त हो, ऊ आफूसँग भएको कुरामा सन्‍तोष छ भने भक्तिले धेरै धनी हुनेछ। जन्‍मँदा हामीले के लिएर आयौं? अनि मर्दा के पो लिएर जानेछौं र? त्‍यसो भए त हामीलाई खान र लाउन पाए त पुगिहाल्‍यो नि तर धनी हुन खोज्‍ने मानिस पापमा पार्ने कुरामा फस्‍दछ। ऊ मूर्ख र हानि गर्ने इच्‍छाहरूको पासोमा पर्दछ। यी खराब इच्‍छाहरूले उसलाई डरलाग्‍दो नाश र नरकमा पुर्‍याउँछ किनभने सब किसिमको खराबीको मूल नै धनसम्‍पत्तिको माया हो। कति मानिसले त धन कमाउने लोभमा लागेर विश्‍वास गर्न छोडिदिएका छन्। अनि दु:खले तिनीहरूको मन नै छियाछिया भएको छ। परमेश्‍वरका भक्त, तिमी यी नराम्रा कुराहरूदेखि अलग्‍गै बस। तिमीले परमेश्‍वरका अघि ठीक ठहरिने कुरामा, भक्तिमा, विश्‍वासमा, प्रेममा, धैर्यमा, नम्र हुने कुरामा आफ्‍नो मन लगाऊ। विश्‍वासको लडाइँमा राम्ररी लड्‍न अनन्त जीवनलाई पक्रिराख किनभने यसकै लागि परमेश्‍वरले तिमीलाई बोलाउनुभएको हो अनि तिमीले पनि धेरै मानिसहरूका सामुन्‍नेमा आफ्‍नो साँचो साक्षी दिएको हो। सबै थोकलाई जीवन दिने परमेश्‍वर र पन्‍तियस पिलातसकै सामुन्‍नेमा साँचो साक्षी दिने ख्रीष्‍ट येशूकै अगाडि म तिमीलाई यो आज्ञा दिंदै छु, तिमीले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍ट नआउञ्‍जेल तिमीले पाएको आज्ञा राम्ररी मान र कसैले दोष लगाउन नपाओस्। परमेश्‍वरले उहाँलाई ठीक समयमा फेरि पठाउनुहुनेछ। परमेश्‍वर नै सबै शक्तिका मालिक, राजाहरूका पनि राजा र प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्‍छ। उहाँ सधैँभरि रहने र कोही पुग्‍न नसक्‍ने उज्‍यालोमा रहनुहुन्‍छ। उहाँलाई कसैले पनि अहिलेसम्‍म देखेको छैन र देख्‍न पनि सक्‍दैन। सधैँभरि रहने शक्ति र आदर उहाँमै रहोस्। आमेन। अहिले यस संसारमा धनी हुनेहरूलाई घमण्‍डी नहुनू भन। तिनीहरूका धन-सम्‍पत्ति सधैँ रहने होइन तर हाम्रो सुखका लागि प्रशस्‍त गरी सबै कुरा दिने परमेश्‍वरमै भरोसा राख भनेर आज्ञा देओ। भलाइको काम गर्नू, भलाइको काममा धनी हुनू, खुला मनको हुनू र अरूलाई दिन तयार हुनू भनी तिनीहरूलाई भन। यसरी तिनीहरूले पछि आफ्‍नो साँचो जीवनमा काम लाग्‍ने धनसम्‍पत्ति जम्‍मा गरून् र उनीहरूले साँचो जीवन जोगाइराख्‍न सक्‍नेछन्।
 अब तिमी धनीहरू हो, मेरा कुरा सुन! तिमीहरूमाथि आइपर्ने दु:ख सम्‍झेर तिमीहरूले डाँको छोडी रुँदै विलाप गर। तिमीहरूका धन-सम्‍पत्ति काम नलाग्‍ने भइसकेको छ। लुगाफाटामा लुगा खाने किरा लागिसकेको छ। सुनचाँदीमा कस परिसकेको छ। त्‍यही कस नै तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी हुनेछ र आगोले झैँ त्‍यसले शरीरलाई नाश गर्नेछ। यी अन्‍तिम दिनहरूमा तिमीहरूले धन-सम्‍पत्ति थुपारेका छौ। तिमीहरूका खेतमा काम गर्नेहरूलाई दिनुपर्ने ज्‍याला दिएका छैनौ। उनीहरूको बिलौना सुन। तिम्रा बाली उठाउने खेतालाहरूका रुवाइ सर्वशक्तिमान् परमप्रभु परमेश्‍वरको कानसम्‍म पुगिसकेको छ। पृथ्‍वीमा तिमीहरूले खुब मोज-मज्‍जा गरेका छौ र काटी मारिने दिनको निम्‍ति तिमीहरू मोटाएका छौ। विरोध पनि नगर्ने निर्दोषलाई दोष लगाएर तिमीहरूले मार्‍यौ।